Iindaba - Ukwaziswa okuneenkcukacha ngocingo oluqhelekileyo oluhlabayo
Ukwaziswa okucacileyo kocingo oluqhelekileyo oluhlabayo
Ucingo oluhlabayo lujijekile kwaye ludityaniswe ngumatshini wocingo oluhlabayo oluzenzekelayo. Ngokuqhelekileyo yaziwa ngokuba yi-iron tribulus, ucingo oluhlabayo, ucingo oluhlabayo. Iindidi zeemveliso ezigqityiweyo: ucingo olunye oluphothiweyo kunye nocingo oluphindwe kabini. Impahla ekrwada: umgangatho ophezulu wocingo lwekhabhoni yentsimbi. Inkqubo yonyango yomphezulu: i-electro-galvanizing, i-hot-dip galvanizing, iplastiki yokutyabeka, ukutshiza ngeplastiki. Kukho imibala eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza, emthubi kunye neminye imibala. Sebenzisa: Isetyenziselwa ukukhusela bodwa imida yomhlaba, oololiwe, oohola bendlela, njl.
Ulwahlulo ngokweNdlela yokuGqwetha
Ucingo oluhlabayo lukuzikhusela kumnatha owenziweyo ngokubhijela ucingo oluhlabayo kulucingo oluphambili (ucingo olungumtya) ngokusebenzisa umatshini wocingo oluhlabayo, nangeenkqubo ezahlukeneyo zokuluka.
Zintathu iindlela zokujija ngocingo oluhlabayo: ukujija phambili, ukujika umva, kunye nokujija phambili.
Indlela ejijekileyo yokujikajika: Kukujija iingcingo ezimbini zentsimbi okanye iingcingo ezininzi zentsimbi zibe yintambo yocingo yentsimbi ephindwe kabini kwaye emva koko ujikeleze ucingo oluhlabayo olujikeleze ucingo lwentsimbi oluboshwe kabini.
Indlela ejijekileyo ejijekileyo: Okokuqala, ucingo oluhlabayo lwenzakalisiwe ngocingo oluphambili (oko kukuthi, ucingo olunye lwentsimbi) emva koko ucingo lwentsimbi luyajijwa kwaye lujijeke lwenze ucingo oluhlabayo olunemicu emibini.
Indlela ejijekileyo elungileyo nembi: Kukujija kwicala elichaseneyo ukusuka kwicala apho ucingo oluhlabayo lwenzakalisiweyo lujikeleze ucingo oluphambili lwentsimbi. Ayijikanga kwicala elinye.
Isizathu sonyango lomphezulu kukomeleza ukumelana nokubola kunye nokwandisa ubomi benkonzo. Unyango umphezulu kweengcingo ezihlabayo kwalenza, nto leyo electro-kwalenza okanye hot-dip iqaqanjiswa; unyango umphezulu PVC ngocingo oluhlabayo yi PVC wawutyabeka, kwaye ucingo oluhlabayo ngaphakathi ucingo omnyama, ucingo electroplated kunye hot-dip ucingo kwalenza.
Ucingo lwe-aluminiyam olubhinqileyo luyimveliso entsha esandula ukubekwa kwintengiso. Umphezulu wayo ugqunywe ngumaleko aluminiyam, ekwabizwa ngokuba aluminized. Wonke umntu uyazi ukuba i-aluminium ayidlanga, ke ukutyabeka kwealuminium kumphezulu kunokuphucula kakhulu ukumelana nokubola kwaye kuyenze ihlale ixesha elide. Injongo yocingo oluhlabayo: isetyenziselwa uthintelo lobusela kunye nokukhuselwa kwimizi-mveliso, izindlu zabucala, imigangatho yokuqala yezakhiwo zokuhlala, iindawo zokwakha, iibhanki, iintolongo, izityalo zokushicilela imali, oomatshini bomkhosi, ii-bungalows, iindonga eziphantsi kunye nezinye iindawo.
Ukucaciswa kunye neNdleko zoBalo
Ubungakanani bocingo lweBWG Umgama webarb 3 " Umgama webarb 4 " Umgama oluhlabayo 5 " Umgama webarb 6 "
Iintsimbi eziBhaliweyo Ukubalwa kweNdleko
ubunzima bebonke X (amaxabiso ezabelo X70% + ixabiso locingo oluhlabayo X30%) + umrhumo wokuqhubekiswa
Ixabiso lokwenyani lokuBala kweengcingo eziBhaliweyo
Kwixesha elizayo, siza kudwelisa eyona datha yokwenyani yokuba wonke umntu abe neenkcukacha ezithe kratya.
1. Ixabiso lentonga yocingo lisekwe kwikoteyishini yamva nje yocingo ngoSeptemba 22, 2014. Ngenxa yefuthe lentsalela yokuveliswa kwesinyithi kuzwelonke, amaxabiso entsimbi ahla ngokubanzi. Ixabiso ngetoni nganye yentonga yocingo ijikeleze i-RMB 2580 ngetoni nganye.
2. Ixabiso lokusingathwa kwentonga. Ngokubanzi, iinkcukacha zocingo oluhlabayo ziNombolo 14 zentsimbi (220mm) kunye neNombolo 12 zentsimbi (260mm). Umrhumo wokuqhubekeka wocingo olwenziweyo ngombane ngokweenkcukacha ezingama-220mm malunga ne-RMB 750 ngetoni nganye. Ewe kunjalo, kukho ukudibanisa okushushu kunye nokwaleka kweplastiki, njl., Ezingadweliswanga apha.
3. Ukuqhubekeka kweendleko. I-220mm yocingo oluhlabayo, umgama ohlabayo yi-12com, umrhumo wokuqhubekiswa ngetoni nganye yi-320 yuan.
Ke ngoko, ixabiso langaphandle kwefektri ye-220mm yocingo oluqhelekileyo lweetoni ngetoni ngama-2580 + 750 + 320 = 3650 RMB ngetoni nganye, kwaye ayibandakanyi imithwalo. Ukuba umthengi uziva ukuba ixabiso locingo oluhlabayo liphezulu xa uthenga, unokuyikhankanya kancinci. Hlisa ixabiso. Ukubona oku, andazi ukuba wonke umntu uqinisekile ngakumbi ngexabiso locingo oluhlabayo? Ndikwakhumbuza wonke umntu ukuba amisele imathiriyeli, iinkcukacha, kunye nobungakanani ngaphambi kokuthenga ukunqanda ukukhohliswa.
Ixesha Post: Sep-16-2020